काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई आमूल रूपान्तरण गर्ने वा नयाँ बनाउने आँट गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत हुनले देशको चौतर्फी सङ्कटको प्रमुख कारण राजनीक दल र नेतृत्व भएको भन्दै रूपान्तरणको खाँचो औल्याएका हुन् ।
उनले लेखका छन्
भनिन्छ-टाउकाको ओखती नाइटामा लगाएर हुन्न! अहिले देशको चौतर्फी संकटको प्रमुख कारण राजनीति/दल/नेतृत्वको स्खलन नै हो । कांग्रेस ‘कांग्रेस’नरहनु; कम्युनिष्ट ‘कम्युनिष्ट’नरहनु; समाजवादी ‘समाजवादी’नरहनु! कि यिनलाई आमूल रूपान्तरण गर्ने वा नयाॅ बनाउने आँट गरौं ! नत्र समयले कसैलाई पर्खन्न है!